Laser manapaka laptop azo antoka amin'ny Electronic Safe Box K-FG600
K-FG600 dia manolotra an'ity marika Digital Electronic Safe ity. Ity vy azo antoka vy 2mm mahery ity dia miaraka amin'ny keypad fisaka sy ny rafitra fanalahidy lehibe. Natao hanamorana ny fampiasana sy ny filaminana tsy mampandefitra. Ny valizy azo ahodina mora foana amin'ny gorodona, na apetaka amin'ny rindrina na kabinetra mba hahamora sy milamina. Izy io dia misy hidy magnetika ho an'ny fanidiana mandeha ho azy tsy misy lakile na kaody pin, ary voalamina ho famaranana aorian'ny fanandramana diso 3. Izahay dia mpanamboatra azy irery, ka fantatrareo fa mahazo ny vidiny tsara indrindra ianareo.
lafiny ivelany: W400 x D350 x H145 mm
refy anatiny: W396x D346 x H98 mm
mihodina: 14L Mahazaka
Hatevina lamba (tontonana):
(azo antoka): 2 mm
20GP / 40GP Quantity (No Pallet): 930/1946 pcs
50L Minibar hisorohana miaraka amin'ny varavarana misokatra ho an'ny Hotel Mini fridge M-50A
Ny faritra plastika rehetra dia azo averina ampiasaina ary ampiasaina indray. Fitaovana tsy misy fangarony, tsy misy harafesina ary fampandehanana herinaratra mora ampiasaina ity barika ity ho fitaovana sarobidy ho an'ny trano fandraisam-bahiny rehetra. Ampidirina ao am-baravarana ny tahony mba hamonjy toerana sy hamelana ny vata fampangatsiahana mbola hisokatra miaraka amin'ny fihetsiketsehana haingana iray.
Dimy ivelany: W400 x D450 x H675mm
GW / NW: 21 / 18.5
kg Fahafahana: 50L
: Volavolan-kery / Frequency: 220-240V (110V tsy voatery) / 50-60Hz
Herinaratra: 60W Halavan'ny vanim-potoana
: 4-12 （（Amin'ny 25 ℃ Ambient
Vata fampangatsiahana zava-pisotro misy alikaola Mini Bar ho an'ny Hotel M-25A
MDE mini bar dia misy amin'ny fahaiza-manao isan-karazany mifanaraka amin'ny fittings kabinetra. Tonga feno miaraka amin'ny jiro anatiny LED ary koa hidin-trano tsara kalitao. Namboarina sy namboarina haharitra izy ireo. Ny fividianana bar kely mangina Reinn dia fampiasam-bola maharitra amin'ny kalitao. Ny tsirairay dia natsangana mba hanoherana ny fampiasana azy isan'andro, ary maharitra ny ain'ny fametrahana.
lafiny ivelany: W400 x D380 x H495mm
GW / NW: 15.5 / 14 kilao
Hotely an'ny vata fampangatsiahana Mini Door sy vata fampangatsiahana ao an-trano M-30A
Ny habeny bitika kokoa dia mamela azy ireo apetraka saika hatraiza hatraiza, anisan'izany ny latabatra misy na eo ambaniny.
ivelany: W400 x D420 x H495mm
Efitra elektronika azo antoka miaraka amin'ny 200 Records K-FG800
Drafitra tsy manam-paharoa sy matevina, azo antoka ny vatasarihana fanokafana ambony indrindra rehefa manandrana mamonjy habaka. Tafiditra anaty crenza na eo ambony latabatra, ity puce ity dia mahazaka solosaina finday 15 "sy karazana entana sarobidy hafa. Ny endri-javatra fanokafana ambony dia mamela ny fidirana mora sy ny kaody voafetra, 4-kaody mihidy ary manokatra ny azo antoka.
Security Electronic Laptop Hotel Efitra fandraisam-bahiny amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny Digital Lock K-FG001
Ny tsipika fiarovantsika premium efa mandroso indrindra, ny valizy elektronika K-FG001, dia natao ho an'ireo hotely mitaky be indrindra maniry hanazava ny vahinin'izy ireo. Izy ireo dia manana keyboard malefaka sy backlit ADA ary fisehoana manga mazava hanatsorana ny fampiasana ny fiarovana. Ireo maodely azo antoka ireo dia azo jerena ao amin'ny mekanisma fanokafana eo aloha ary koa amin'ny endrika fanokafana ambony.
Efitra hotely OEM azo antoka miaraka amin'ny keypad Blue Backlight K-FGM001
Dimy ivelany: W400 x D350 x H145
Dimy anatiny: W396x D346 x H98
Azo antoka ny fisokafan'ny hotely ambony amin'ny alàlan'ny LED Display K-FGM600
K-FGM600 dia natao mba handraisana laptop lehibe be loatra. Izy io dia manana ny endri-javatra mahazatra rehetra an'ny safes elektronika ao amin'ny efitrano ary manome toerana fitahirizana ampy. Ny vahiny dia hiaina fiadanan-tsaina amin'ny fahafantarana ny zava-tsarobidiny dia ho azo antoka sy azo antoka mandritra ny fotoana ijanonany.
Fiantohana ny vidin'ny famokarana mari-pamatrarana vy eo an-tampon'ny Hotel Safe Locker K-JG001
Ity Hotel Safe ity dia fiarovana azo antoka amin'ny kalitao avo lenta natao hitazomana ny ankamaroan'ny solosaina finday na zavatra kely sarobidy hafa toy ny firavaka, ny fizaham-bokin'ny mpandeha, ny vola, ny carte de crédit, ny fakan-tsary sns… Ny tompon'andraikitra amin'ny hotely na tompona trano fandraisam-bahiny dia manana kaody master sy master lakile ary ny vahiny tsirairay avy dia afaka misafidy kaody manokana 4-6.
Modely No: K-JG001
Dimy ivelany: W420 x D380 x H200mm refy
Dimy anatiny: W416 x D333 x H196mm
20GP / 40GP Quantity (No Pallet): 606/1259 pcs
12345 Manaraka> >> Page 1 / 5
Small Size Hotel Safes Ary Boxes Safe petra-bola , tantera-drano Cash Box , Small tondro Safe , manasa-Ny Mpitarika Mini Bar Fa Hotel Room , Electronic Office Safe Box , Hafanàm-po an Key Safe Box , trano rehetra Products